Trosan’ny JIRAMA : TIKO : 20 miliara, Claudine : 1,250 miliara -
AccueilRaharaham-pirenenaTrosan’ny JIRAMA : TIKO : 20 miliara, Claudine : 1,250 miliara
09/10/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Mampalahelo ny resaka voizin’ny antoko TIM sy ny mpomba an-dRavalomanana Marc mikasika ny fanapahan’ny orinasa JIRAMA ny rano sy jiro tao amin’ny orinasa TIKO. « Ny orinasa sy mpandraharaha malagasy irery ihany hoy izy ireo no anaovana ankasomparana, sy akatona fa rehefa vahiny tsy sahan’ny fanjakana ny manasazy azy…”.
Voalohany, tsy misy lalàna milaza fa tsy azo saziana rehefa orinasa malagasy, na dia tsy manara-dalàna aza, ary hadinoin’ny antoko TIM sy ny mpomba an-dRavalomanana Marc fa nandritra ny fitondrany no tena nahita loza ny mpandraharaha malagasy. Tsy nisy sahy namokatra vokatra avy amin’ny ronono intsony teto, taorian’ny fialany teo amin’ny fitondrana vao niverina ny famokarana vokatra azo avy amin’ny ronono (fromazy, dibera, yaourt) hitantsika eny amin’ny tsena. Nizaka ny tsy eran’ny ainy ireo tantsaha mpiompy omby vavy be ronono nandritra ny fitondran’i Marc Ravalomanana, ary nataon’ny TIKO sy MAGRO ampihimamba daholo ny seha-pamokarana.
Faharoa, tsy marina ny filazana fa ny orinasa malagasy irery ihany no akaton’ny fanjakana noho ny tsy fanarahan-dalàna. Ohatra vao haingana ny BIDCO ao Mahajanga, izay orinasa vahiny nahazo famatsiam-bola 20 tapitrisa Dolara avy any amin’ny Banky Iraisam-pirenena kanefa nakaton’ny fanjakana rehefa tsy manara-dalàna.
Fahatelo, notapahin’ny orinasa JIRAMA ny jiro sy rano tao amin’ny orinasa TIKO Andranomanelatra noho ny trosa tsy voaloa mitentina 20 miliara, fa notapahin’ny orinasa JIRAMA ihany koa ny an’i Claudine Razaimamonjy noho ny trosa mitentina 1,250 miliara. Nahoana kosa moa no ireo vahoaka madinika ihany no tapahina ny jiro sy rano rehefa tsy mahaloa JIRAMA? Iza izany no heverin’ny orinasa TIKO hibaby izany 20 miliara izany?
Niverina namokatra tokoa ny orinasa TIKO rehefa nomen’ny fanjakana Hery Rajaonarimampianina alalana satria nambaran’ny minisitry ny Vola teo aloha fa nanaiky ny handoa ny trosany izay mitentina 600 miliara (hetra tsy naloan’ny orinasa TIKO hatramin’ny niakaran’i Marc Ravalomanana teo amin’ny fitondrana). Izao anefa vao fantatra fa tsy nisy akory izany fifanarahana izany, ary tsy mivonona handoa ny trosany mihitsy ny orinasa TIKO fa naleony indray aza nitady hevitra tamin’ny alalan’ny fifanarahana tamin’ny orinasa AAA hialana amin’izany.
Tsy afaka ny hilaza mihitsy araka izany i Marc Ravalomanana sy ny orinasa TIKO fa nanaovan’ny fitondrana ankasomparana. Efa nomen’ny fanjakana famindram-po, navela nisokatra ny TIKO kanefa mibaribary ilay fomba fisainan’ny tompony tsy mijery afa-tsy ny tenany manokana, mitady hevitra hialana amin’ny fandoavana ny trosany amin’ny fanjakana. Aza hadinoina fa nakaton’ny fanjakana Marc Ravalomanana avokoa izay orinasa tsy nahaloa hetra sy nanana trosa tamin’ny fanjakana, ohatra amin’izany ny orinasa Les 3 Frères Andrefanambohijanahary. Nakaton’ny fitondrana Andry Rajoelina ihany koa ohatra ny orinasa Life, tahaka ny nanakatonan’ny fanjakana Hery Rajaonarimampianina ny BIDCO any Mahajanga satria tsy nanara-dalàna.
Koa ireo orinasa madinika irery ihany ve no tsy hiharan’izany sazy izany rehefa tsy manara-dalàna fa ny orinasa goavana tahaka ny TIKO kosa tsy maintsy omena famindram-po? Ny madinika irery ihany ve no tsy maintsy mitady hevitra izay handoavany ny faktioran’ny JIRAMA, fa ny an’ny TIKO na dia mahatratra 20 miliara aza tsy tokony hotapahina?
Tadidintsika tsara nandritra ny raharaha Claudine, fa isan’ny nandray anjara tamin’ny fivoizana iny raharaha iny ny antoko TIM sy ny mpomba an-dRavalomanana Marc. Saingy rehefa izy ireo no hampiharana ny lalàna dia milaza fa ny « mpandraharaha malagasy irery ihany no mahita loza amin’ny fitondrana? ». Fa angaha tsy teratany Malagasy i Claudine Razaimamonjy? Izay no antsoina hoe tan-dalàna fa tsy anavakavahana fiaviana akory ny fampiharana ny lalàna. Olona mieritreritra hitondra firenena ve dia tsy manaiky handoa hetra, kanefa teren’ny CUA handoa ny hetran-trano taona 2017 mialohan’ny volana Desambra 2017 sahady ny vahoakan’Antananarivo? Olona tsy manaiky handoa JIRAMA ve no mieritreritra hiverina eo amin’ny fitondrana, kanefa iaraha-mahalala izao ny fahasahiranan’izany orinasa JIRAMA izany, izay niantraika tany amin’ny olom-pirenena tsy an-kanavaka noho ny delestazy?
Aiza ao anatin’izany ilay hoe fitiavan-tanindrazana? Olona milaza ny tenany fa tia tanindrazana ve dia mambotry ny fireneny tsy mety mandoa hetra, tsy mety handoa faktioran’ny JIRAMA? Dia natao ho an’iza izany ny fandoavan-ketra, natao ho an’iza izany ny fandoavana ny faktioran’ny JIRAMA? Mivandravandra sahady izany fa raha toa tafaverina eo amin’ny fitondrana i Marc Ravalomanana, dia tsy ho isan’ny orinasa handoa hetra, ary tsy handoa JIRAMA ny orinasany rehetra, tahaka ny nitranga nandritra ny fito taona nahateo amin’ny fitondrana azy.
Fivahinianana any Roma- Italia : Hitondra ny fanohanany an’i Madagasikara ny FIDA, PAM ary ny FAO